Heegan oo guuldarro qaraar dhadhansiisay Dekedda+Sawirro
Sunday, March 24th, 2019 - 09:59:56
Friday October 26, 2018 - 21:17:21 in Wararka by Hussein Hadafow
Naadiga Kubadda Kolayga Heegan ayaa talaabo u qaaday hanashada horyaalka kubadda Kolayga 2018-19 kadib markii ay guul ka gaartay Naadiga Dekedda oo horyaalka kula loolamaysay.
Kulankan oo ka dhacay garoonka Wiish , waxaa usoo daawasho tagay taageerayaasha labada koox iyo masuuliyiin iyo qaybha kale duwan oo isboortiga.
Heegan oo horyaalka daafacanaysa ayaa garoonka soo gashay iyadoo doonaysa in ay xajisato hogaankeeda isla markaana ka aargudato Dekedda oo guuldarro awood sheegasho ah gaarsiisay wareegga hore ee horyaalka, halka Dekedda ay kaliya u furnayd in ay guul u hesho si u tiigsato hanashda horyaalka oo ay ugu dambaysay tan 2012 kolkaas oo ay si qurux badan uga qaaday Heegan.
10 Daqiiqo ee ugu horaysay Heegan ayaa hogaanka ku qabtay 11 dhibcood oo nadiif ah, waxaase soo kabasho wanaagsan samaysay Dekedda,w axaana qaybta hore lagu kala nastay 27-21.
10-ka Saddaxaad Dekedda ayaa faraqa dhibcaha kala simmantay Heegan, waxayna labada koox noqdeen kuwa aan hogaanka ku kala fogaan, waxaana markii Dambe Heegan u suurto gashay in ay ka faa’iidaystaan qaladaad ka dhacay Dekedda sidaasna hogaanka dheeeraystaan.
Xiddiga No.7 Naadiga Dekedda Cabdulqaadir Muuse Cusmaan Naani oo ayay Heegan celin waayeen kadib markii u noqday laacibka ugu saamaynta Badnaa kulanka Naadiga Dekedda, waxaana sababtiisa garoonka looga saaray Laacibka ay Heegan ku tiirsanayd kulanka Cabdriaxmaan Cabditawaab iyo Maxamed Cali Xoogsade oo qalad ku galay, basle dadaalkiisa uma suurto gelin in ay kooxdiisa libin helaan, waxaana Heegan ay guusha ku raacday 47.43.